Madaxweynaha Puntland oo ka deyriyey xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya, balan-na qaaday.
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ka hadlayay caleema-saarkii dhigiisa Jubbaland AXmed Maxamed Islaam (AXmed Madoobe) ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay marxaladaha siyaasadeed ee dalku waqtigan marayo.
Wuxuu sheegay in lasoo maray waqti adag oo laga soo gudbiyey dalka, isagoo sheegay in ay ka rajeynayaan Madaxda hadda ee dawladda Faderaalku in ay garowsadaan qiimaha wada hadalka uu leeyahay oo ay ka gudbiyaan dalka marxalahada adag.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in sida muuqata aan la gaari doonin doorasho qof kasta codkiisa dhiibto, balse ay waajib tahay in ay dhammaan dhinacyada oo dhan qeyb ka noqdaan geedi socodka lagu gaarayo doorasho.
Puntland ayuu sheegay in looga dayan doono hanaanka doorashooyinka, marka la gaaro waayo doorasho qof kasta iyo codkiisa, wuxuuna cadeeyey in ay soo saaran baarlamaanku Lifaaqa ay raaciyaan Dastuurka Soomaaliya.
Sidaas oo kale, wuxuu sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in xal siyaasadeed uu yimaado ka hor, inta aysan dhamaan sharciyadda hay’addaha dawladda Faderaalka ee dalka, wuxuuna kusifeeyey waxa socda in ay tahay in hoos loo dhugto.
Madaxweynaha Jubbaland ayuu Siciid Deni ugu yeeray in uu sameeyo Latashi badan oo dadweynaha badan ee cabanaya ay tahay in la qanciyo, isagoo sheegay in aysan marar badan suuragal aheyn in la buuxiyo dhammaan filashada ay filayaan dadka Soomaaliyeed.
Qabyo qoraalka Dastuurka Soomaaliya ayuu sheegay in uusan aheyn wax dhaw, ilaa haddana aaan shaqadaba loo ogolaan in ay galan guddigii Maamul gobaleedyadu kusoo darsadeen guddiyada ku howlan, taas oo uu sheegay in ay muujinayso in aan daacad laga aheyn waxa socda oo dhan.